अस्पतालको बेडमा युवतीले गरिन् मेकअप, कारण थाहा पाएपछि सबैजना चकित – Sanjal Nepal
Homeसमाचारअस्पतालको बेडमा युवतीले गरिन् मेकअप, कारण थाहा पाएपछि सबैजना चकित
December 19, 2020 admin समाचार 2281
एजेन्सी । मानौं, तपाइँ बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुभयो । तापाइँ अस्पतालमा भएको थाहा पाएर तपाइँका कोही साथीभाइ आफन्त वा नजिकको व्यक्ति तपाइँलाई भेट्न अवश्य आउँछन् ।
तपाइँलाई कोही अस्पतालमा भेट्न आउँदैछ भन्ने थाहा पाउनुभयो भने के तपाइँ अनुहारमा मेक अप गरेर चिटिक्क परेर अस्पतालको बेडमा बस्नुहुन्छ त ? पक्कै पनि बस्नुहुन्न होला । तपाइँलाई भेट्न आउने मान्छेले पनि तपाइँलाई मेकअप गरेर बसेको अवस्थामा भेट्ने चाहना हुँदैन ।
तर, भियतनामकी एक युवतीले भने अस्पताल भर्ना भएर अस्पतालको बेडमा बस्दा पनि मेकअप गरेर चिटिक्कै परिन् । यो देखेर अस्पतालका चिकित्सक र नर्सहरु समेत छक्कै परे ।
उनले किन गरिन् त एकाएक मेकअप ? आफूलाई प्रेमीले मेकअप बिना नदेखुन् भनेर हतारहतार युवतीले मेकअप गरेकी रहेछिन् ।
चाइना प्रेसका अनुसार वाङ्गमेइ अस्पतालमा प्रेमी भेट्न आउने खबर सुनेर युवती निकै उत्साहित भइन् । निकै खुसी हुँदै उनले फेसबुकमा क्याप्सन समेत लेखिन्, ‘मेरो प्रेमी मलाई भेट्न आउँदैछन्’
प्रेमीले आफूलाई कमजोर नदेखोस्, नराम्रो नदेखोस् भन्ने उद्देश्यले उनले तत्काल (अस्पतालको बेडमै) बेस मेकअप, आइब्रो, ब्लसर, आई स्याडो, आई लाइनर लगाइन् साथै झुम्कासहित नेलपोलिस समेत लगाइन् ।
रेस्पिरेटर राखिएको उनको अनुहारमा मेकअप निकै उत्कृष्ट देखिएको थियो तर यस्तो अवस्थामा पनि हेभी मेकअप गरेको भन्दै धेरैले उनको आलोचना समेत गरेका छन् ।
उनले आफू सुन्दर छु भनेर देखाउन यतिसम्म पनि गर्न नपर्ने धेरैले कमेन्ट गरेकन छन् । कतिपयले उनलाई बिरामीजस्तो नदेखिएको बताएका छन् ।
कतिले भने प्रेमीले चिन्ता लिने हुन् (नराम्रो देखेर छाड्ने हो) कि भनेर युवतीले यस्तो गरेको हुनसक्ने बताउँदै उनको समर्थन गरेका छन् ।
November 21, 2020 admin समाचार 3128
काठमाडौ । सोनिका रोकाय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित नाम हो । कलाकार, युट्युवर रोकाय अहिले आफ्नो जन्मथलो बझाङमा छन् । कोरोनाको जोखिम बढेसंगै मुलुकभर जारी भएको लकडाउनकाबीच बझाङ गएकी रोकाय अहिले पनि उतै समय विताउँदै
November 29, 2020 admin समाचार 4092
यी राशीका महिलाहरु सम्पर्कको लागि चाडै तयार हुन्छन (जानी राखे राम्रो ) के तपाईलाई थाहा छ कुन राशी भएका महिलाहरु शा’रिरीक सम्पर्कको लागि अरु भन्दा छिटो तयार हुन्छन । महिलाहरूको राशि अनुसार स’हवासको चाहनापनि फरक
February 5, 2021 admin समाचार 1714
यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ पुनर्मिलन भिडियो पुरा हेर्नुहोला ! काठमाडौ । तनहुँमा भएको एउटा घ’टना अहिले सामाजिक सञ्जाल निकै चर्चामा छ । इन्डियन लाहुरे रहेका राहुल गुरुगंले स्मीतासंग निकै सानोमा विवाह गरेका थिए ।
LEX 18 agenda conversation: Job club (445180)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418743)
Hello world! (346053)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318845)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115342)